लकडाउन फितलो हुँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्यो – Upahar Khabar
लकडाउन फितलो हुँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्यो
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७७, आईतवार १६:३६ May 10, 2020
काठमाडाैँ – आजको काठमाडौंको ट्राफिक जाम तथा घुमफिर डरलाग्दो छ । डेढ महिनाभन्दा लामो लकडाउनको अर्थ अब रहेन । दुवै सदनका सांसद, संसद सचिबालयका कर्मचारी तथा बडीगार्डलाई PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि लकडाउन पूर्ण रुपमा खोलिएको छ । आज देखिएको भीडभाड र सुरक्षाकर्मीको मौनताले प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले उनीहरुलाई बिशेष निर्देशन दिएको छ, लकडाउन खोल्नको लागि ।
छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमित बढेकोबढ्यै छन् । सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । भैरहवा लगायतका ठाउँमा भारतबाट कामदार नेपाल आएर निर्माणको काम आज सुरु भएको छ । यो अवस्था सायद नेपालका सबै सिमाबर्ती जिल्लामा सुरु भएको छ ।
सरकारले काठमाडाैँ बासीको Random Sampling को आधारमा न्युनतम ३०,००० जनाको PCR Test गरेर नेगेटिभ आएको भए लकडाउन केहि खुकुलो गर्न मिल्ने थियो । सिमाना १०० % शिल गरेर तथा सिमाबर्ती प्रत्येक जिल्लामा न्युनतम दश / दश हजारको दरले PCR Test गरेर सुरक्षित देखेको भए लकडाउनको मोडालिटी फेर्न मिल्ने थियो । कुनै जांच नगरि, पर्याप्त औषधि / उपकरणको ब्यबस्था नगरि, अन्य कुनै आकस्मिक तयारी नगरि तथा बिज्ञहरुको सल्लाह नलिइ मनगढन्ते रुपमा यसरी लकडाउन खोल्नु सरकारको गैह्रजिम्मेवारी कदम हो ।
सरकारले बस्तुस्थितिको मुल्यांकन गर्न नसकेपनि हामी जनताले परिस्थिति बुझ्नु जरुरी छ | सहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन हामी जनता जिम्मेवार बन्नुको बिकल्प रहेन । कृपया ! जरुरी काम बाहेक घरभित्र बस्नुहोला । हाम्रो सानो असावधानीले हामी, हाम्रो परिवार तथा समाज संक्रमित हुनसक्छ । अहिल्यै यो स्तरको लकडाउन खोल्ने बेला भएको छैन ।
सरकारले न्यून आय भएका बर्गलाई ठोस राहत दिएर लकडाउनलाई ब्यबस्थित गराउन जरुरी छ । मानवीय क्षति अपुरणीय हुन्छ । यो तथ्य सरकारले समयमै बुझोस् । जनस्वास्थ्यमाथि अल्पदृष्टिको कारण गम्भीर संकट नआओस ।
अन्त्यमा कोरोना भाइरसले ठूलो सानो, यो पार्टीको / त्यो पार्टीको, यो पदको / त्यो पदको भन्दैन । जनपक्षीय कुरा उठान गर्न पार्टीको घेरा नहेरौं । हामी सबै एकै डुंगामा छौं, डुंगा डुब्यो भने हामी सबै डुब्नेछौं !
भारतले लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडकबारे नेपालको अडान स्वागतयोग्यः सांसद ठगुन्ना
संसदमा बडूको प्रश्नः सडक कहिले देखि बन्न सुरु भयो ? यो सूचाना सरकारसँग थियो की थिएन ?